Gaana Songs & Music Player App အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（30.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Gaana Songs & Music Player App
Gaana သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အချစ်အရှိဆုံးဂီတ streaming app ဖြစ်သည်။ Bas Bajna Chahiye Gaana!
- 40 သန်း Mp3 Mp3 MP3 Songs & Podcasts - အရည်အသွေးမြင့် HD Music Streams များ - Podcasts & Audio တို့သည်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ပြသသည် , ဟာသ, သတင်း, တရား0င်လေ့ကျင့်ခန်း, ကလေးများပုံပြင်များ, ဆို့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအွန်လိုင်းသီချင်းများ
Gaana Plus ကိုစာရင်းသွင်းပါ။ - အော့ဖ်လိုင်းတေးဂီတ, အခမဲ့သီချင်းများ, တိုက်ရိုက်သီချင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, အနုပညာရှင်များနှင့်အင်တာနက်ရေဒီယို
- Live Eventents နှင့် Hindi Ringtones အသစ်များ, နောက်ဆုံးသီချင်းများ, နောက်ဆုံးသီချင်းများ, သစ်စသောသီချင်းများ, အကြီးမြတ်ဆုံးသီချင်းများ, အော့ဖ်လိုင်းသီချင်းများနှင့်ဒေါင်းလုပ်သီချင်းများ ။ Bollywood သီချင်းများ, ဟိန္ဒူသီချင်းများ, Tamil Songs, Tamil Songs, Bhojpuri သီချင်းများ, မာရ်နတ်သီချင်းများ, မာရ်နတ်သီချင်းများ, မာရ်နတ်, နီပေါ, နီပေါ, နီပေါ, နီပေါ, နီပေါ, နီပေါ, POP, Hip, Hip Hop, K-Pop, Bhajans တို့ကဲ့သို့သောမျိုးနွယ်စုများကိုနားထောင်ပါ။ တေးသီချင်းများ, DJ သီချင်းများ, DJ သီချင်းများ, DJ သီချင်းများ, ဝမ်းနည်းဖွယ်သီချင်းများ, Bhangra Music, အိန္ဒိယကိုးကွယ်ခြင်း / Bhakti Geet, Ganesh Aarti, Ganesh Aarti, Hanresan Chalisaa, Rocke Rubsmes, Workout Rhangals, Festies သီချင်းများ, - NEHAKKKAR, ARijit Singh, Badshah, Kumar Sanu, Kumar Sanu, alka yagnik, alka moose wala, sp balasubraphmaniyam, sp balasubrahmaniyam ဟုတ်ကဲ့, Siriram, Siriram, K.S. Chithra, P. Susheela, AP Dhillon, Justin Bieber, LATA MANDSHKAR, Beatle Lahiri, Beatles Floyd, BeatStreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys, Royplay, ed adams, ed sheeran, shawn adma
Gaana Song app သည် Chaate Baaliyan, Donati Rani, Droand Baitha Hai, Dilu Kusu, Raati Rani, RaatiAry Lambiyan, Donati Rani ကဲ့သို့ထိပ်တန်းဘောလီးယား Rani ဖြစ်သည်။ Pushpa မှဟိဒီ, Shesshaah, Radhe Shyam & Sooryavanshi မှဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ။ အင်္ဂလိပ်စာသည် Womandoja ကြောင်ကဲ့သို့သောဂြိုဟ်ကဲ့သို့ Hits, Justin Bieber, BITT - BTS ကိုကိုင်ထားသည်။ La La Bheemla, naatu naatu, oo antava oo oo oo oo ontava ကဲ့သို့သော Teluge Songs ကိုနားထောင်ပါ။ Oo Solriya Oo Oo Oo Oo Oo Oo Solriya, Jalabulajangu, Tum Tum တို့ကဲ့သို့သောအိန္ဒိယသရုပ်ဆောင်များပါ0င်သည်။ Zakir Khan, Sunny Leone, Bk Shivani, Gaur Gopal DAS, Sadhguru, Tamil Patili သီချင်း, Punjabi Patalgal, Tamil Patalgal, Gaani, မလေးရှား Ganannal, Bangla Gaan & Gujarati Geeto ။ သီချင်းအသစ်များမှစိမ်းလန်းသောဂန္ထဝင်ဟောင်းများမှဒေသဆိုင်ရာသီချင်းများ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအိန္ဒိယအနုပညာရှင်များ, လူကြိုက်များသောအယ်လ်ဘမ်များနှင့်ရုပ်ရှင်များ၏အသံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ Gaana.com, Gananna.com, Gana.com, Gana, Gaana, Gaana Musal နှင့် Gaana Musal နှင့် Gaana Musal နှင့် Gaana Musal တို့ကရှာဖွေသည်။
INR 99 (India) သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ 3.99 (အိန္ဒိယ) အတွက် Gaana Plus အားစာရင်းသွင်းပါ။ Google Play အကောင့် (သို့) ငွေပေးချေမှု၏နှစ်သက်သော mode ကို မှလွဲ. လတိုင်းအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည်။ Google Play အကောင့်ရှိစာရင်းပေးသွင်းသည့်စာရင်းမှအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ SMP မှတစ်ဆင့် OTP ကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် SMS ပို့ရန် SMS ပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. http://gaana.com/privacy_poly.html
http://gaana.com/ters_and_and_conditions သို့သွားပါ .html ပိုမိုသိရှိရန်အတွက်
Like & Twitter.com/gaana.com